(L) အစားအစာစွဲ - အဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်များ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောအဆီများသည်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
(L) အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု: အမေရိကန်နိုင်ငံသား 70 ရာခိုင်နှုန်းအဆီ Are အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာရှင်းပြပါနိုင် (2010)
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု: အမေရိကန်နိုင်ငံသား 70 ရာခိုင်နှုန်းအဆီ Are အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာရှင်းပြပါနိုင်မလား
မာကု Hyman MD, အောက်တိုဘာလ 16, 2010
ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရနှင့်အစားအစာလုပ်ငန်းတို့သည်အဝလွန်ခြင်းကပ်ရောဂါနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်“ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်” ကိုပိုမိုအားပေးသည်။ လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းမှုကိုပိုကျင့်သုံးသင့်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်သင့်တယ်၊ အစာမစားဘဲရှောင်ရှားသင့်တယ်၊ ကောင်းသောအစားအစာ၊ မကောင်းတဲ့အစာမရှိဘူး၊ ဒါအားလုံးဟာဟန်ချက်ညီတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စေတယ်။ ၎င်းသည်သီအိုရီအရအသံတစ်ခုထွက်သည်။
သိပ္ပံပညာမှတွေ့ရှိချက်အသစ်များအရစက်မှုလုပ်ငန်းများမှထုတ်လုပ်သော၊ သကြား၊ အဆီနှင့်ဆားပါသောအစားအစာ - စက်ရုံတစ်ခုတွင်စိုက်ပျိုးခြင်းထက်အပင်တွင်ပြုလုပ်သောအစာသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတစ်ပေမြင့်သောပုံ, ဒါမှမဟုတ်ပန်းသီးချပ်၏ဧရာမပန်းကန်ဆိုပါစို့။ သငျသညျပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသို့မဟုတ်ပန်းသီး binge မယ်လို့သူမည်သူမဆိုကိုသိသလား? အခြားတစ်ဖက်တွင်အာလူးကြော်တစ်ဦးသောတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် cookies များကိုတစ်ပြင်လုံးကိုအိတ်, ဒါမှမဟုတ်ရေခဲမုန့်တစ်ပိုင့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူများသည်တစ်ဦးသတိလစ်, reptilian ဦးနှောက်စားခြင်းစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းအတွက်ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းစွဲလမ်းသည်မဟုတ်, cookies များကို, ချစ်ပ်, ဒါမှမဟုတ်ဆော်ဒါလုံးဝစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကို“ ပြောရုံသာပြောပါ” သည်ချဉ်းကပ်မှုမကောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုအစားအစာစွဲလမ်းမှုအတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ကိုကင်း (သို့) ဘိန်းဖြူစွဲသူသို့မဟုတ်အရက်သမားကိုပထမ ဦး ဆုံးသှား။ ရိုက်၊ အဲဒါမလွယ်ဘူး စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသောတိကျသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာယန္တရားများရှိသည်။ ဘယ်သူကမှဘိန်းဖြူစွဲလမ်းသူ၊ ဘယ်သူမှအဆီဖြစ်ဖို့မရွေးချယ်ကြဘူး။ အပြုအမူများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆုလာဘ်စင်တာများမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သာမန်စွမ်းအားကိုကျော်လွှားပြီးငတ်မွတ်မှုကိုထိန်းချုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏သာမန်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများကိုလွှမ်းမိုးသွားစေသည်။
အဘယ်ကြောင့်အရက်သမား၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်လျော့နည်းအောင်မြင်စွာသောက်သုံးဆေးလိပ်ဖြတ်ပါသနည်း
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကကိုယ်အလေးချိန်တစ်ခုပြင်းထန်သောဆန္ဒရှိသော်လည်း, အဝလွန်လူတွေထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, ဆီးချို, နှလုံးရောဂါ, အဆစ်နှင့်ပင်ကင်ဆာအဖြစ်လူမှုရေးအမည်းစက်နှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အတှကျဒါခက်ခဲပါသလဲ သူတို့အဆီဖြစ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာအချို့အမျိုးအစားများကိုစွဲလမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သကြား, ဆီဥ, နဲ့ဆားကိုဖန်ဆင်းစားနပ်ရိက္ခာစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်း share သို့မဟုတ်အများပြည်သူစေမည်မဟုတ်ကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်းပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်အခါ။ ကျနော်တို့ဇီဝသည်ဤအစားအစာများကိုတပ်မက်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ထဲကသလောက်စားရန်ကြိုးနေကြသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မတရားသောအကြောင်းကိုသိကြပေမယ့်သိပ္ပံစွဲလမ်း, အဘယျသို့အစားအသောက်နှင့်စွဲလမ်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါနှင့်အချို့သောအစားအစာတကယ်တော့ဖြစ်ပါသည်လျှင်ဥပဒေရေးရာနှင့်မူဝါဒသက်ရောက်မှုတွေဘာတွေလုပ်နေလဲသနည်း?
လေ့လာမှုနှင့်သကြားဓာတ်၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှု၊ အဆီနှင့်ဆားငန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူနှင့်နီကိုတင်းတို့၏အလားတူများကိုလေ့လာကြပါစို့။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ DSM-IV တွင်တွေ့ရှိရသောဆေးဝါးမှီခိုမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံနှုန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၎င်းသည်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ကြောင်းကြည့်ပါ။
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏနှင့်ရည်ရွယ်ပါသည်ထက်ပိုရှည်ကာလ (လေ့ overeat သူတွေကိုတစ်ဦးဂန္လက္ခဏာ) ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
persistent အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်ကြိုးစားမှု။ (ဤမျှလောက်များစွာသောအဝလွန်ကလူကတဆင့်သွားပါတဲ့အစားအစာမှာထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားမှုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ )
အများကြီးအချိန် / လှုပ်ရှားမှု, အသုံးပြုမှုရရှိရန်သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်နာလန်ထူနေသည်။ (အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့သူများသည်ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားမှုအခြိနျယူပါ။ )
အရေးကြီး, လူမှုရေးလုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတက်ပေးထားသောသို့မဟုတ်လျှော့ချ။ (ကျနော်အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်နေသောလူနာများစွာ၌ဤကြည့်ရှုပါ။ )
အသုံးပြုမှု (အခါ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှိသောအသုံးပြုဥပမာအခန်းကဏ္ဍတာဝန်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပျက်ကွက်) ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏အသိပညာကြားမှနေဆဲဖြစ်သည်။ (နေမကောင်းဖြစ်ပြီးသူမည်သူမဆိုနှင့်အဆီအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုလားပေမယ့်အကူအညီမပါဘဲအနည်းငယ်ကဒီရလဒ်ကိုဦးတည်သွားစေလိမ့်မည်ဟုသောအစားအသောက်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ )
သည်းခံစိတ် (ပမာဏသိသိသာသာတိုးလာ; အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်း) ။ (တစ်နည်းပြောရရင်သင်ဟာပုံမှန်စားလေ့ရှိတာ (သို့) ဆုတ်ခွာခြင်းကိုမခံစားမိဖို့အတွက်ပိုပိုပြီးစားနေဖို့လိုတယ်။ )
ဆုတ်ခွာလက္ခဏာများလက္ခဏာများ; ထုတ်ယူသက်သာရာမှခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းဥစ္စာ။ (လူအများအပြားတို့သည်သူတို့၏အစားအစာမှအချို့သောအစားအစာများကိုဖယ်ထုတ်သည့်အခါဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်အတူတူပင်လက္ခဏာများများစွာရှိသော“ အနာပျောက်စေသောရောဂါ” ကိုခံစားကြရသည်။ )
ကိုအနည်းငယ်ကဒီစွဲလမ်းပုံစံကနေအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူများနှင့်သကြားနှင့်အတူဆက်ဆံရေးဟာဆနျးစစျလြှငျ, အထူးသဖြင့်, သင်ဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့သကြားတစ်ဝှမ်းအပြုအမူနှင့်ဿုံသကြားပွဲစဉ်ကိုတက်၏ overconsumption ၏ဇီဝသက်ရောက်မှုကွောငျးတှေ့ပါလိမ့်မယ်။ အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်ထဲကအတော်များများသည်သင်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
Yale ၏စားနပ်ရိက္ခာပေါ်လစီနှင့်အဝလွန်ခြင်းဆိုင်ရာ Rudd စင်တာမှသုတေသီများက“ အစားအစာစွဲခြင်း” ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ (၁) သင်၌အစားအစာစွဲခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောစကေးပေါ်ရှိအချက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီအသံတစ်ခုခုနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိသလား။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်“ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစားစရာစွဲလမ်းသူ” ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါအခြို့သောအစားအစာများကိုစားခြင်း start အခါ, ငါစီစဉ်ထားခဲ့သည်ထက်အများကြီးပိုစားခြင်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းရှာပါ။
ငါကျော်ထံမှနှေးကွေးသို့မဟုတ် lethargic feeling အချိန်အများကြီးဖြုန်းနေကြတယ်။
ငါဒါမကြာခဏသို့မဟုတ်ငါ overeating အစားအလုပ်လုပ်ကိုင်, ငါ့မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်း, ဒါမှမဟုတ်ငါပျော်မွေ့သောအခြားအရေးကြီးသောလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ထံမှအပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အချိန်သုံးစွဲကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအမြောက်အမြားအတွက်အချို့သောအစားအစာများကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာကြိမ်ရှိခဲ့သည် ။
ကျွန်မစိတ်ခံစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းအစားအစာသို့မဟုတ်အစားအစာ၏တူညီသောငွေပမာဏ၏တူညီသောအမျိုးအစားများကိုစားသုံးထားရှိမည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ငါထိုကဲ့သို့သောလျှော့ချအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသကဲ့သို့ငါလိုခငျြခံစားမှု, သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်အပျော်အပါးရရှိရန် ပို. ပို. စားရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ငါခုတ်လှဲသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ, လှုံ့ဆော်မှု, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါအဝင်အချို့သောအစားအစာများ, အစာစားခြင်းရပ်တန့်သောအခါငါဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါပြီ။ (ဥပမာစသည်တို့ကိုဆိုဒါပါ pop, ကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်, စွမ်းအင်ဖြည့်အချိုရည်အဖြစ်ဖိန်းအဖျော်ယမကာအပေါ်ခုတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေမပါဝင်ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး)
ငါဘာလို့လဲဆိုတော့အစားအသောက်နှင့်စားထိရောက်စွာ (နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်, အလုပ် / ကျောင်း, လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ, မိသားစုလှုပ်ရှားမှုများ, ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ) အလုပ်လုပ်ငါ့စွမ်းရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောပြဿနာများကြုံတွေ့ရပါသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြားသူများအပေါ် အခြေခံ၍ အ ၀ လွန်ကလေးများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စက်မှုအစားအစာများကိုစွဲလမ်းကြသည်။
ဤတွင်အစားအစာ, အကယ်စင်စစ်စွဲလမ်းနိုင်အတည်ပြုသိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက် (ii) ၏အချို့သောနေသောခေါင်းစဉ်:
သကြားသည်အခြားစွဲလမ်းစေသောဆေးများကဲ့သို့ပင် neurotransmitter dopamine မှတစ်ဆင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ဦးနှောက်စိတ်ကူးယဉ် (PET Scan ဖတ်) High-သကြားနှင့်မြင့်မားသောအဆီပါတဲ့အစားအစာပဲဘိန်းဖြူ, ဘိန်း, ဒါမှမဟုတ်ဦးနှောက်ထဲမှာမော်ဖင်းအကိုက်များကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သောပြသထားတယ်။ (iii)
ဦးနှောက်ပုံရိပ် (PET Scan ဖတ်) အဝလွန်လူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ dopamine မြှင့်တင်ရန်အရာတပ်မက်စေခြင်းငှါပိုပြီးအောင်, dopamine receptors ၏အောက်ပိုင်းနံပါတ်များရှိသည်ပြသထားတယ်။
အဆီနှင့်သကြားလုံးများများပါသောအစားအစာများသည် ဦး နှောက်အတွင်း၌ကိုယ်ခန္ဓာ၏ opioids (မော်ဖင်းအကိုက်ကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများ) ကိုထုတ်လွှတ်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။
ဦး နှောက်၏ဘိန်းဖြူနှင့်မော်ဖင်းအကိုက် (naltrexone) အတွက်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများသည်ပုံမှန်အလေးချိန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုသောက်သုံးသူများအတွက်ချိုသော၊ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းနှင့် ဦး စားပေးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
လူများ (နှင့်ကြွက်များ) သည်သကြားကိုသည်းခံနိုင်စွမ်းရှိသည် - ၎င်းတို့သည်အရက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်ရန်ပစ္စည်းများစွာလိုအပ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးမှစွဲစေသည့်စွဲလမ်းသူများကဲ့သို့သကြားနှင့်ရုတ်တရက်ဖြတ်တောက်သည့်အခါတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများသည်“ ရုပ်သိမ်းခြင်း” ကိုကြုံတွေ့ရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင်ကန ဦး အစားအစာကို“ ပျော်မွေ့စွာစားသုံး” ပြီးနောက်သုံးစွဲသူသည်၎င်းတို့ကိုမြင့်မားသောအစားအစာများအဖြစ်မသုံးစွဲတော့ဘဲပုံမှန်ခံစားရသည်။
McDonald's မှ Morgan Spurlock သည်နေ့စဉ်အရွယ်အစားကြီးသုံးအစားအစာများစားခဲ့သော Super Size Me ရုပ်ရှင်ကိုသတိရပါ။ ထိုရုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေသည့်အရာမှာသူသည်ပေါင် ၃၀ ရရှိသည်၊ သို့မဟုတ်သူ၏လက်စထရောတက်သည်၊ အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာသူစားခဲ့သောအစားအစာ၏စွဲလမ်းစေသောအရည်အသွေးနှင့်ပန်းချီကားပုံတူဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်၏အစတွင်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်များစွာစားသောအစားအစာကိုစားသည့်အခါ၎င်းသည်သူ၏ပထမဆုံးပါတီပွဲ၌အရက်အလွန်အကံျွသောက်သောဆယ်ကျော်သက်ကဲ့သို့ပင်၎င်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ရုပ်ရှင်၏အဆုံးအားဖြင့်သူသည်ထိုအမှိုက်သရိုက်များကိုစားသည့်အခါသူကသာလျှင်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည်စိတ်ကျဝေဒနာ၊ မောပန်းမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးသူ၏မူးယစ်ဆေးမှဆေးလိပ်ဖြတ်သူသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်သကဲ့သို့သူ၏လိင်စိတ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အစားအစာကစွဲလမ်းနေတယ်။
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်အတူဤပြဿနာများကိုအစားအစာထုတ်လုပ်သူသုတေသီများအနေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများရှိနေသော်လည်းသူတို့အစားအသောက်ထုတ်ကုန်၏စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့အတူတကွပါဝင်ပစ္စည်းများထားမည်သို့ဆိုပြည်တွင်းရေး data တွေကိုဖြန့်ချိဖို့ငြင်းဆန်သောကြောင့်ပိုဆိုးနေကြသည်။ သူ့စာအုပ်ကျော်၏အဆုံး၌, ဒါဝိဒ်သည် Kessler, MD အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ယခင်ဦးခေါင်း, အစားအစာ neuro-ဓာတုစွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်း hyperpalatable အစားအစာများ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့ဖန်ဆင်းထားသည်မည်သို့သိပ္ပံဖော်ပြသည်။
ဤသည်အငွေ့ပျံခြင်းကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတက်စေသည်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသောလေးနက်ဇီဝကမ္မအကျိုးဆက်များကို ဦး တည်သည်။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောဟားဗတ်လေ့လာမှုတွင်အဝလွန်သောဆယ်ကျော်သက်များသည်အညစ်အကြေးစားရန်ခွင့်မပြုသည့်အခါတစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ပိုသောက်ကြသည်။ အစာကစွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်သူတို့သည် ပို၍ စားခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသောက်ပြီးနောက်အရက်ကဲ့သို့ပင်ဤကလေးများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုစင်တာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသကြား၊ အဆီနှင့်ဆားများအပြည့်ပါရှိသည်။ သူတို့သည်လှောင်အိမ်အတွင်းရှိကြွက်များနှင့်တူသည်။
ရပ်ပြီးတစ်မိနစ်လောက်စဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ပိုစားပါကတစ်နှစ်လျှင် ၁၈၂၅၀၀ ကယ်လိုရီနှင့်ညီမျှလိမ့်မည်။ ကြည့်ကြရအောင်၊ မင်းတစ်ပေါင်ရဖို့အပို ၃၅၀၀ ကယ်လိုရီကိုစားမယ်ဆိုရင်ဒါကနှစ်စဉ်အလေးချိန် ၅၂ ပေါင်ပဲ။
သကြားဓာတ်၊ အဆီဓာတ်မြင့်မားခြင်း၊ ကယ်လိုရီများပြားခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာသည်စွဲလမ်းစေလျှင်၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ၎င်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်မည်သို့သြဇာလွှမ်းမိုးသင့်သနည်း။ အစိုးရပေါ်လစီများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်အဘယ်သက်ရောက်မှုများရှိသနည်း။ တရားဝင်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများ၏အစားအစာတွင်စွဲစေသည့်အရာများကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းပြုလုပ်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သနည်း။
Big Food ကဆန္ဒအလျောက်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမျှပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကဒီသိပ္ပံကိုလျစ်လျူရှုမယ်။ သူတို့မှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါထာသုံးခုရှိတယ်။
ဒါဟာအားလုံးရွေးချယ်မှုအကြောင်းပါ။ သင်စားသောအရာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ သင်မည်ကဲ့သို့ရောင်းချသည်သို့မဟုတ်သင်စားနိုင်သည့်အစားအစာများကိုမည်သည့်စျေးကွက်တွင်ရောင်းချသည်ကိုထိန်းချုပ်သောအစိုးရစည်းမျဉ်းကထိန်းချုပ်သောပြည်နယ်၊ အစားအစာ“ ဖက်ဆစ်များ” နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်များကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်။
ကောင်းသောအစားအစာများနှင့်မကောင်းတဲ့အစားအစာများမရှိပါ။ ဒါဟာအားလုံးငွေပမာဏအကြောင်းပါ။ ထို့ကြောင့်အဝလွန်ခြင်းကပ်ရောဂါအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အစားအစာများကိုအပြစ်မတင်သင့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစားအစာမဟုတ်ဘဲပညာရေးကိုအာရုံစိုက်ပါ။ အဲ့ဒီကယ်လိုရီကိုသင်လောင်ကျွမ်းနေသရွေ့သင်စားတဲ့အရာကအရေးမကြီးပါဘူး။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီအမြတ်အစွန်းအတွက်မဟုတ်, ထိုလူမြိုးအာဟာရစိတ်ဝင်စားတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းကနေဝါဒဖြန့်ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။
အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာနှင့်အစိုးရ၏စားနပ်ရိက္ခာမူဝါဒများတွင်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဝလွန်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောဂါကပ်ရောဂါကိုဖြေရှင်းရန်တစ် ဦး ချင်းရွေးချယ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ကိုထောက်ခံခြင်းနှင့်အလေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လူတွေကသိပ်မစားတာ၊ ပိုလေ့ကျင့်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ အစိုးရကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမပြောစေချင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာအခမဲ့ရွေးချယ်မှုချင်တယ်။
သို့သော်သင်၏ရွေးချယ်မှုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, သို့မဟုတ် Big စားနပ်ရိက္ခာမောင်းနှင်မှုအပြုအမူ Insidious စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်မှတဆင့်ပါသလဲ
အဖြစ်မှန်မှာလူများစွာသည်ပန်းသီးသို့မဟုတ်မုန်လာဥနီများကိုမ ၀ ယ်နိုင်သည့်နေရာများ၊ လမ်းဘေးလမ်းများမရှိသည့်လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းများမလုံခြုံသည့်နေရာများတွင်နေထိုင်သောအစားအစာသဲကန္တာရများတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့အဆီလူတစ် ဦး အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကအဆီတွေများနေလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအပြစ်တင်ရမလဲ။ သူ၌ရွေးချယ်စရာဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆိပ်ရှိသောအစားအစာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေထိုင်သည်။ ကျောင်းကနေ့လည်စာနှင့်အရောင်းစက်များသည်အမှိုက်များနှင့်“ အားကစားအချိုရည်” များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အဘယ်သို့စားနေသည်ကိုပင်မသိကြပါ။ အစားအစာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုအိမ်ပြင်တွင်စားသုံးပြီးအိမ်ချက်ပြုတ်သည့်အစားအစာအများစုသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်စက်မှုလုပ်ငန်းအစားအစာများဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဆိုင်များတွင်မီနူးတံဆိပ်ကပ်ခြင်းမရှိပါ။ Outback Steakhouse ဒိန်ခဲကြော်တစ်မျိုးတည်းမှာ ၂၉၀၀ ကယ်လိုရီဒါမှမဟုတ် Starbucks venti mocha latte ၅၀၈ ကယ်လိုရီဆိုတာမင်းတို့သိလား။
အတူတကွပေါင်းစပ်သောအခါပတ်ဝန်းကျင်အချက်များ (ကြော်ငြာ၊ မီနူးတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အခြားသူများကဲ့သို့) နှင့်စွဲလမ်းစေသောဂုဏ်သတ္တိများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများကိုကျော်လွှားသည်။ ဤသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အစိုးရ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများထက်ကျော်လွန်ပြီးသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအားစီမံခန့်ခွဲရန်မူဝါဒချမှတ်ခြင်းသည်“ ထိန်းချုပ်ထားသောပြည်နယ်” သို့ ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်ဟုဟန်ဆောင်ခြင်းသည်စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့၏ကိုယ်ကျင့်တရားကင်းမဲ့သည့်အလေ့အထများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းသို့စက်မှုအစားအစာ၏အစစ်အမှန်ကုန်ကျစရိတ် Build ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရှုံးနိမ့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပေါ်သက်ရောက်မှု Incude ။
အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့။ အစိုးရထောက်ပံ့ငွေများ 80 ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိကျနော်တို့လောင်သည့် junk အစားအစာအများကြီးကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့ပဲပိစပ်နှင့်ပြောင်းဖူး, သွားပါ။ ကျနော်တို့ထောက်ပံ့မှုများအားပြန်လည်စဉ်းစားနဲ့ပိုမိုသေးငယ်တဲ့လယ်သမားတွေနဲ့သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆင်းရဲသောသူကိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းဖွင့်လှစ်ဖို့စူပါမားကက် Incentivize ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းလက်၌လက်သွားပါ။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကကျနော်တို့ကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွေ့မြင်အစားအစာသဲကန္တာရဖြစ်ပါတယ်။ ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်လူလည်းအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာတစ်ခုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကပေးမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးများအားစားနပ်ရိက္ခာရောင်းဝယ်မှုကိုအဆုံးသတ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားနိုင်ငံ ၅၀ သည်ဤအမှုကိုပြုခဲ့ကြပြီ၊
ကျောင်း lunchroom ပြောင်းလဲပါ။ ၎င်း၏လက်ရှိပုံစံအတွက်အမျိုးသားရေးကျောင်းမှာနေ့လည်စာအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးလုပ်ကြံဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လာမယ့်မျိုးဆက်ငါတို့ထက် fatter နှင့် sicker ဖြစ်ချင်လျှင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကျောင်းများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အစာအာဟာရပညာရေးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစားအသောက်လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုအားပေးမြှင့်တင်ပေးသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပုံမှန်အခြေအနေများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ (၅) ၎င်းသည်အများပြည်သူနှင့်နိုင်ငံရေးအရဆန္ဒရှိရုံမျှသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကထိုသို့မပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအဝလွန်ခြင်းနှင့်နာမကျန်းမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကပ်ရောဂါနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤတိုင်းပြည်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်းကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံကိုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, drhyman.com ၏အစားအသောက်များတွင်နှင့်အာဟာရအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
မာကု Hyman, MD
(ဈ) Gearhardt, AN, Corbin, WR နှင့် KD 2009 ။ Brownell ။ အဆိုပါယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေး၏ပဏာမ validation ကို။ အစာစားချင်စိတ်။ 52 (2): 430-436 ။
(ii) et al Colantuoni, C တို့, Schwenker, ဂျေ, ဆက်မက်ကာသီ, ပီ။ 2001 ။ အလွန်အကျွံတွင်းသကြားဓာတ်စားသုံးမှု dopamine နှင့်ဦးနှောက်အတွက် mu-opioid receptors မှ binding ပွောငျးလဲ။ Neuroreport ။ 12 (16): 3549-3552 ။
(iii) et al Volkow, ND, Wang, GJ, Fowler, JS ။ လူသားများတွင် 2002 "Nonhedonic" အစားအစာလှုံ့ဆျောမှု dorsal striatum အတွက် dopamine ပါဝငျသနှင့် methylphenidate ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချဲ့ထွင်။ Synapse ။ 44 (3): 175-180 ။
(ဃ) Ebbeling သမဝါယမ, Sinclair KB, Pereira, MA, Garcia က-ဂို့အီး, Feldman HA, Ludwig DS ။ အဝလွန်နှင့်ပိန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအစာရှောင်ခြင်းအစာကနေစွမ်းအင်စားသုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2004 ဇွန် 16; 291 (23): 2828-2833 ။
(v) Brownell, KD, Kersh, R. , Ludwig ။ DS, et al ။ 2010 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်နှင့်အဝလွန်ခြင်း: တစ်အငြင်းပွားဖွယ်ပြဿနာတစ်ခုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှု။ ကနျြးမာရေး AFF (Millwood) ။ 29 (3): 379-387 ။